Obaamaan yeroo Finfinnee daawwatetti hoteelaaf Birrii miliyoona 8 oli baasii godhe - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Obaamaan yeroo Finfinnee daawwatetti hoteelaaf Birrii miliyoona 8 oli baasii godhe
Obaamaan yeroo Finfinnee daawwatetti hoteelaaf Birrii miliyoona 8 oli baasii godhe
Hiiltaniif sa’atu dhale; EthioTelecomiifis osoo hintiifin hinhafne
Obaamaafi jilli isaa Finfinnetti kan qubate Hoteela Hiiltan ture. Hoteelli Hiiltan guyyaa lamaaf guutummatti kan jila Ameerikaa prezidaant baaraak Obaamaan durfame ture jechuun nidanda’am. Hoteela Hiiltanitti kutaa hirribaa 1280 ture kan jila Ameerikaa kanaaf qabame. Halkan lamaaf ta’us, Obaamaan tajaajila Hiiltan isaaniif laateef qarshii Eth miliyoona 8,491,127 lafa kaayee deemeera.
Kanaan alattis gareen Obaamaa kuni kaardii bilbilaatiif Birrii 150,800 baasii godheera.
Prezidaantiin Ameerikaa yoo biyya tokko daawwatu nama hedduun marfameeti. Hedduun namoota isa marsanii angawoota sadarkaa ol aanooti. Namoonni dhimma nagaafi wolqunnamtii irratti hojjatanis hedduuddha. Egaa baay’achuu jila Ameerikaa ta’uu hinoolle kan baasii guddaaf isaan saaxile.
Hiiltaniif sa’atu dhale. EthioTelecomiifis osoo hintiifin hinhafne.
Previous articleSaayinsistoonni hantuuta qaruutee buufata qorannoo keessatti uumani
Next articleKeeniyaa keessa gandi jiraattonni dubartoota qofaa jiraachuu quba qabduu?